धेरै खुसी लाग्यो!
प्रचण्डजीले त्यहाँ भाषण गर्न कहिले जाने?
Padam Bahadur Rawal
देशको गौरव बढेको महसुस भयो!
कहिले कहीँ त यस्ता किसिमका समाचार पनि सुन्न पाइयोस् न।
prachanda ji.. tiha pani gayara yaso sukila mukila ko vashan garna ho ki,,?
खुशीको कुरा हो।
प्रचण्डजी, त्यहाँ पनि गएर यसो सुकिलामुकिलाको भाषण गर्ने हो कि?
समाचार धेरै नछाप्नुस् है! फेरी कोही कोहीको कानमा पर्यो भने भत्काउन तयार हुन्छन्। कोही कोही के, त्यही भत्काउन मात्र जानेका नेपालको बरिष्ठ पार्टी!
प्रचण्ड कहाँ जाने भनेको?
Mohan THE Mickey
यसको निर्माणयोजना संजय श्रेष्ठले गर्नुभएको भन्ने सुनेको थिएँ। नागरिकले यस्ता 'डिजाइनर'को बारेमा पनि खोजखबर गरेर लेख्नुपर्यो।
यसो खुसीको कुरामा त खुसी नै जाहेर गर्नुपर्छ नि! जहाँ पनि राजनीति गर्ने?, एकले अर्काको खेदो गर्ने?
नेपालीको लागि राम्रो समाचार!
अति उत्तम समाचार! मन गदगद् भयो।
देशको लागि खुसिको खबर!
DR dhungana, Doha, Qatar
समाचार धेरै नछाप्नुस् है! फेरी कोही कोहीको कानमा पर्यो भने भत्काउन तयार हुन्छन्।
यो समाचार प्रचण्डलाई सुनाइदिने कि?
धेरै राम्रो छ भनेर समाचार नछापौं| प्रचण्ड चीन जाँदैछन्।
मलाई गर्व लागेको छ!
krishna pokharel usa
साङ्घाइमा राखिएको नेपालको पेभे‍लियनमाथि मलाई गर्व छ!